Itiye eliphuzi: izakhiwo eziwusizo
Sonke sazi kahle kakhulu ngezinzuzo zamavithamini. Umbuzo uvela, kuphi ukuthola amavithamini? Enye yale mithombo iyitayiti, ethandwa yibo sonke siphuza, okuyizo zonke izindlu. Kodwa emhlabeni kunezinhlobo ezahlukene zama teas, futhi njengoba bethi, ukuthanda okuhlukile.
Yini efanelwe ukunaka itiye eliphuzi, izakhiwo eziwusizo, mhlawumbe, ukuhlukanisa nokunye? Itiye eliphuzi mhlawumbe libiza kakhulu futhi lingavamile kuzo zonke izinhlobo zetiyi. Ubhekwa njengalokhu ngisho nasezweni lakubo eChina, njengoba inqubo yakhe yokukhiqiza iyinkimbinkimbi kakhulu. Ngakho-ke, akuzange kufundwe kanye netiye eluhlaza. Nakuba itiye eliphuzi lifana nohlaza okwedlulele, kodwa lenzelwe ukuqeda ukunambitheka kwe-herbaceous kwalokhu okulandelayo. Phuza itiye eliphuzi futhi ujabulele ukuhlakanipha kwe-East kanye nezakhiwo zalo eziwusizo!
Kodwa ngezindlela eziningi itiye eliphuzi alilona liphansi kune-ally yalo. Izakhiwo eziwusizo zetiye eziphuzi zifana kakhulu nalabo abahlukanisa ngokuhlaza. Abathandi abaningi betiye abathandanga ukunambitheka kwetiyi eluhlaza, bavame ukukhetha itiye eliphuzi - izinzuzo zezempilo zifanayo, kodwa ukunambitheka kuyinkimbinkimbi futhi kumnandi. Izingxenye ezisebenzayo zetiye eziphuzi zi-emodin, i-magnesium, i-silicon, i-tanins ne-oxalic acid. Ezingxenyeni ezithandwa kakhulu zibizwa ngokuthi i-Jun Shan Yin Zhen (Izinhlamvu zesiliva ezivela kuJun Mountain Shan) noMeng Ding Huang Ya (Izinso eziphuzi ezivela eMeng Ding Mountain). Futhi kungenzeka ukuthi ngokufuna okukhulayo kwalolu hlobo lwetiyi, kuzoba okungabizi kakhulu.
Itiye eliphuzi libizwa ngokuthi lezi zinto eziwusizo ezilandelayo.
1. Etikheni eliphuzi kunevithamini C. Esikhathini samaqabunga amaqabunga amaqabunga angama-4 ngaphezulu kunomsila we-citrus, kodwa uma ulungisa amaqabunga etiyi, ezinye ze-ascorbic acid zilahlekile. Kodwa nokho akusiyo encane kangaka, ikakhulukazi kuma-teas aphuzi, lapho i-vitamin C iphindwe kathathu kunama-black teas.
2. Itiye eliphuzi lingasiza ukuhlanza amathumbu nokuthuthukisa ukugaya. Itiye eliphuzi lithuthukisa ukugaya, ukuhlukanisa amafutha angena emzimbeni. Lekhwalithi yetiye ephuzi iye yasetshenziswa ngokuphumelelayo ekudleni kwezinto zokudla - ekulwa namakhilogremu amaningi. Njengoba ukukhwabanisa kwezicubu ze-adipose kuyinkimbinkimbi eyinkimbinkimbi emzimbeni lapho umzimba udinga khona inani elithile lezinto kanye nokudla okwanele kwamanzi - ngesonto noma ngisho nenyanga ngeke kwenzeke ukuthi ubhekane nezikhilomitha ezingaphezulu.
Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi itiye akuyona iphilisi yemilingo, hhayi i-panacea. Kuyindlela yokuphila! Ngakho-ke ungasebenzisi kabi itiye. Uma unamathela kulo mbono, itiye eliphuzi lingabhekwa ngokufanele njengendlela ejabulisayo futhi ewusizo ekwenzeni ukunciphisa umzimba. Ngokusebenzisa itiye eliphuzi njalo, iningi labantu liyabona ukuthi izinkinga eziningana zomuthi wamathumbu zivamile, noma yikuphi ukudla okuqala ukuba ngcono, umzwelo wokudla ngemva kokudla, njll,
3. Itiye eliphuzi lingakhuthaza ukuvinjelwa kwe-bile, okubangela ukucutshungulwa kwenqubo. Enye inzuzo empilweni ukuthi itiye eliphuzi lisiza umzimba ukuthi ukhiqize ubhiya obuningi, okwenza ukuba umanyolo wamafutha uphuze.
4. Itiye eliphuzi lingasiza ekuqedeni izinsimbi ezinzima emzimbeni futhi kusize kwezinye izifo ezihlobene nesibindi. Kuyabonakala ukuthi itiye eliphuzi liqukethe izinto eziyinkimbinkimbi ezisiza ekuhlanzeni kahle isibindi sezinyosi bese ubuyisela amangqamuzana awo.
5. Itiye eliphuzi lingasiza ekunciphiseni i-arthritis ne-rheumatism. Abantu abazwa ubuhlungu obufanayo bayalwa ukuba baphuze izindebe ezingu-4-5 zetiye eziphuzi nsuku zonke ukuze kutholakale ubuhlungu nge-arthritis ne-rheumatism futhi babhekane nezinye izimpawu ezihambisana nezinkinga zethambo. Ngakho-ke, izinga eliphakeme lama-antioxidants itiye eliphuzi linomthelela wokulwa nokubuthakathaka kwamathambo.
6. Itiye eliphuzi lingasiza ekwelapheni induna, i-eczema, i-psoriasis. Itiye eliphuzi liqukethe i-antioxidants, eyaziwa ukuthi inomphumela omuhle empilweni. Ziyakwazi, uma zingavimbeli, okungenani zinciphisa ukuguga kwamaseli. Bavikela isikhumba emanzini nezinye izibhamu. Ngaphezu kwalokho, ngezinkinga ezinzulu ezifana ne-psoriasis, i-acne ne-eczema, ukusebenzisa itiye eliphuzi kunganikeza imiphumela eyanelisayo ngaphandle kwemiphumela emibi ngezinye izikhathi ehambisana nokusetshenziswa kwemithi yendabuko.
7. Itiye eliphuzi lihilelekile ekuvimbeleni umdlavuza. Kusanda kutholakala ukuthi itiye eliphuzi liphumelela emdlalweni wokulwa nomdlavuza. I-Flavonoids yihlobo lwe-antioxidants etholakala itiye eliphuzi, elivimbela ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza futhi kuvimbela ukuthuthukiswa kwamaseli amasha.
8. Itiye eliphuzi lingasiza ekwehliseni umfutho wegazi. Kwaboniswa ukuthi itiye eliphuzi linamandla okwehlisa igazi futhi ngaleyo ndlela lithuthukise umsebenzi we-arteries. Itiye eliphuzi linganciphisa izinga eliphezulu legazi futhi ligcine izinga layo eliphilile. Ukusiza ukukhuthazwa kwezempilo kwemithwalo yegazi, itiye eliphuzi lingasiza ukunciphisa imiphumela yokushaywa yisifo.
9. Itiye eliphuzi lihilelekile ekuvimbeleni impilo yenhliziyo. Itiye eliphuzi linciphisa ingcindezi ngaphakathi kwemithambo yegazi, ivikela inhliziyo nayo yonke isimiso sokujikeleza. Muva nje, abacwaningi bathola ukuthi abantu abaphuza izindebe ezimbili noma ngaphezulu zetiyi eliphuzi ngosuku cishe cishe bangama-50% okufa ngemva kokuhlaselwa yinhliziyo.
10. Itiye eliphuzi lisiza uketshezi lwe-cholesterol. Ucwaningo lwamuva luveze ukuthi ama-catechins, elinye iqembu lama-antioxidants elitholakala itiye eliphuzi, linganciphisa i-cholesterol. Kunezinhlobo ezimbili ze-cholesterol, i-cholesterol enhle neyimbi. Itiye eliphuzi landa kahle, kuyilapho linciphisa okubi. Lokhu kusiza ukuvimbela ukuqina kwemithambo yegazi.
11. Itiye eliphuzi liqukethe i-fluoride, okuyisakhi sokulwa namagciwane emvelo. I-fluoride equkethwe itiye, ivimbela ukuvela kwe-calculus ne-caries, iqinisa amazinyo futhi ivimbele ukubhujiswa kwayo, inomphumela wokulwa nokuvuvukala.
Izifundo zesayensi zakamuva zibonise ukuthi itiye eliphuzi licebile kuma-polyphenols, i-polysaccharides, amavithamini nama-amino acids, linomthelela okhethekile ekuvikeleni nasekwelapha umdlavuza wesisu, futhi kune-caffeine engaphezu kwetiyi eluhlaza.
Ngakho, itiye eliphuzi kanye nezakhiwo ziyizinyathelo zokuzivikela ezivimbela izinkinga ezingenhla. Into eyodwa icacile: uze uzame, awukwazi.
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilenze
Amafutha abalulekile we-bergamot nokusetshenziswa kwawo ngezinhloso zokwelapha nezokungcola
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-muscovite
I-Herpes virus, ukuvimbela nokwelashwa
Ikhekhe le-kursk le-pancake
Ungasusa kanjani amanzi amaningi ngokweqile emzimbeni?
Indlela yokulondoloza i-iguana ekhaya
Ukuphulukisa uhlelo lwe-self-healing reiki
Indlela yokuhlonza izindawo eziseFeng Shui efulethini
Imifino eqoshiwe noma Imifino Ehlanganisiwe
Amagqabha ukuthi yini futhi angawagqoka kanjani
Indlela ukupheka ingulube in multivariate?
Ubuhlobo bomdwebi nomodeli
Flowers Beloperone no Jacobinia: indlela yokukhula kahle
Indlela yokuvimbela ukucindezeleka?
Amaqebelengwane nge-chocolate emhlophe evela kumayipi ama-microwave